Iindaba zesiXhosa, 05 eyoKwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 05 eyoKwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 05/03/2019
Ubuyiswa njanina umhlaba wase District six
Kudingeka ungenelelo lezopolitiko kwizigaba zozithathu zika rhulumente kho kwenziwe iProject yokwakhiwa kwezindlu ezixabisa izigigidi ze Randi kwingingqi i-Distric Six eNtshona Koloni.Amakhulu khulu abantu ababesakuhlala eDistric Six basalinde ukuba kulungiswe umba wokubuyiswa komhlaba. Ngo November wonyaka ogqithileyo inkundla yayalela urhulumente ukuba aze nesicwangciso sokuba izakubanelisa njani na abahlali base Distric Six kumba wamabango omhlaba ukusuka ngonyaka ka 1998. Ukanti kwimpepa ezafakwa enkundleni kweveki ephelileyo urhulumente uthe akanokwazi ukubuyisela wonke umntu umhlaba kwabo babefake amabango omhlaba.
Bayaqhanqalaza abafundi baseTUT
Isigqeba esilawula iDyunivesithi i-TUT sithi zokufakana imilomo nabakwa NFAS ngenjongo zokusombulula ingxaki ezijamenele nabafundi ekukhokelele ekuvumbulukeni koqhankqalazo kwelaziko mfundo nokukwakhokelele ekumisweni kwenkqubo zokufunda ndawonye nokufundiswa kwelaziko mfundo, izolo.Bafundi base TUT bagqushalazela ukungahlawulwa kwemali yokutya ndawonye nokungoneli kwamagumbi okulala abafundi.Ophuma kule Dyunivesithi uWilla de Rusyter uthi kuzakubhengezwa namhlanje ukuba zibuyela nini izifundo eTUT.Uthi bakuthethwathethwano ndawonye nabathabathi nxaxheba ukuba ukuzame ukuncedisa abafundi ukuba kusonjululwe ingxaki zabo.
Kusaphandwa ngomlilo oqale eOvercome Heights
Awukaziwa unobangela womlilo ogqogqise kwindawo yamatyotyombe eOvercome Heights cebu kuhle eLavender Hill. Lo mlilo uqale kubusuku bayizolo malunga nomkhono emva kwentsimbi yesibhozo nalapho icandelo lemililo nohlangulo lithumele izigadla zokucima umlilo ezilithoba kwakunye nesithuthi sohlangulo. Omnye wabacimi mlilo uye wabanjwa sisifuthu-futhu kwakunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni waza wafumana unyango kwalapho. Ukanti akukho monzakalo ungomnye ubikiweyo.
Bekuqhuma imbumbulu kuHola wendlela uN2
Asinde cebetshu amagosa esipolisa esixeko amabini kwakunye nabanye abaqhubi bezithuthi emva kokuhlaselwa kuhola wendlela uN2 eKapa. Isiganeko sakutshanje sehle ngethuba la magosa emisela ukunceda abaqhubi abaxinwe ngamatye abekwe endleleni. Kuye kwavulelwa kuwo ngeembumbulu kodwa noko kunjalo akubanga kho mntu wonzakeleyo. Kwiveki ephelileyo amagosa adize ukuba abezonyanzeliso mthetho abasayi kuhamba bodwa ukuqubisana nohlaselo oluqhubayo kuN2 nakuR300. Ilungu lekomiti kasodolophu umnumzana J.P Smith uthi kufuneka kusetyenziswe ubuchwephesha bobunjineli ukukhawulelana noku.
Eli lomzantsi Africa limi kwindawo yesibini emazweni ngenani eliphezulu labaphathi
Iingxelo zophando lakutshanje zibonisa ukuba ilizwe loMzantsi Afrika lelinye lamazwe anenani eliphezulu labaphathiswa xa kuthelekiswa nenani labemi beli lizwe. Eli lizwe limi kwindawo yesibini ngenani eliphezulu labaphathiswa nalapho umongameli Cyril Ramaposa ayalele umphathiswa weenkonzo zikarhulumente nolawulo unkosazana Ayanda Dlodlo ukuba aqwalasele le nyewe. UDlodlo uthi uphando sele lwenziwe kwaye iziphumo nezindululo zikakuthiwa thaca kumongameli.
Umbutho weANC uvelise elithi akanawo umgaqo nkqubo wokujongana noxhaphazo ngokwezosondo
Iqela leANC livakalise ukuba alinawo umgaqo-nkqubo wokujongana noxhaphazo lwezesondo. Oku kuza emva kokuvela kwezityholo zokuziphatha gwenxa kwezesondo kwamalungu alo. Ikomiti yeANC kwinguqu yezentlalo ithi nangonanje ingenawo lo mgaqo-nkqubo, iqhuba kakuhle kakhulu ukuqubisana nezikhalazo kodwa noko kunjalo ophuma kule komiti uNocawe Mafu uthi bayavuma ukuba kukho imfuneko yokumiliselwa komgaqo-nkqubo
Usakhangelwa umbulali kaSibusiso Kwinana
Asakhangela naphantsi kwezicithi amapolisa ababulali bomdlali kamabonakude obesandul’ukugqama uSibusiso Kwinana obulewe kuphango lasesitalatweni ngobusuku bangolwesihlanu ePitoli. Amapolisa athi uKwinana obeneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala uhlaselwe wahlatywa lwangcol’ungele ngethuba ephangwa imfonomfono yakhe phof’ebuya kwindawo yemiboniso-bhanya-bhanya nomhlobo wakhe. UKwinana ebedlala kumboniso othi ‘Matwetwe’ kwaye ukubhubha kwakhe kukhwankqise intlaninge yabemi beli lizwe.